घर बस्दा मैले त यस्तो काम गरें नि | Ratopati
हुनत मलाई घर बाहिर गएर खेल्न मन पर्दैन । म बहिनीसंगै घरभित्रै छत र आगनमा खेल्छु । तर आज मेरो घर बाहिर सुनशान छ त्यसैले मलाई पनि खेल्न मन लागेको छैन ।
मलाई नरमाईलो मात्र लागेको छ । बहिनीसंग पनि खेल्न मन लागेन ।
तर मलाई मेरो मामुले १ हप्ता सम्म तिमीले के के गर्ने तालिका बनाउ भन्नुभयो । मैले तालिका बनाए । मामुले बाबालाई पनि तालिका बनाउन लगाउनु भयो, मामु आफूले पनि तालिका बनाउनु भयो ।
मेरो तालिकामा मामुले पनि यो यो काम गर भनेर थपिदिनु भयो । मेरो तालिकामा मैले खेल्ने, टि.भी. हेर्ने, नाच्ने, गाउने मात्र लेखेको थिए । तर मामुले प्रत्येक दिन एक एक वटा काम थपिदिनु भयो । जस्तै:-चित्र बनाउने, लुगा सिलाउने र टाँक हाल्न सिक्ने ,घर सफा गर्ने,भाडा मोल्ने आदि आदि ।
अनि तपाईहरुलाई थाहा छ ? मैले बारीमा घिउसिमी र फर्सीको बिउपनि रोपेको छु नी । त्यसलाई म संधै पानी हाल्छु । अहिले त्यसले टुसा हालेको छ। मलाई त्यसको खुब माया लाग्छ । बहिनीले कुल्ची दिन्छे कि भनेर डर पनि लाग्छ ।
कोरोनाको कारणले आज नेपाल बन्द भएको पनि कति धेरै दिन भएछ तर मलाई नरमाइलो लागेको छैन ।
लेख लेख्ने पनि यो एक दिनको काम नै थियो मेरो।
मलाई लेख लेख्न मेरो हजूरबुबा उमाकान्त रेग्मी र राधा पौडेल आमाले फोनवाट सघाउनु भयो |साथीहरु तपाईहरु पनि त्यसै गर्नुस है कति रमाईलो हुन्छ ।
लकडाउनले फुराएका सिर्जनाहरु